Tatitra Momba ny Tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah any Géorgie
NIELY tsikelikely ny hafatra momba ilay Fanjakana teto Géorgie, toa an’ilay lalivay nafangaro tamin’ny lafarinina ao amin’ny fanoharan’i Jesosy. (Mat. 13:33) Tsy hita hoe nandroso ny asa fitoriana tamin’ny voalohany, nefa tsy ela dia niely hatraiza hatraiza ny vaovao tsara ka nanova fiainan’olona maro.
Tena mampihetsi-po ny tantaran’ny vahoakan’Andriamanitra eto Géorgie. Ho hitanao ato fa be fitiavana izy ireo, nanam-pinoana, tsy nivadika, mora nahita hevitra, ary be herim-po, ‘na tamin’ny mora na tamin’ny sarotra.’—2 Tim. 4:2.
Jereo ato ny fanazavana fohifohy momba an’ilay tany, ny mponina, ny fomba amam-panao, ary ny fiteny mampiavaka an’io firenena any akaikin’ny Ranomasina Mainty io.
Nahita ny fahamarinana tany amin’ny firenena hafa ny olona sasany, ary nifindra teto Géorgie mba hampiely ny hafatra momba ilay Fanjakana.
Anisan’ny nahatonga ny fitomboana tatỳ aoriana ny fivoriana kristianina sy ireo boky sy gazety tamin’ny teny géorgien. Nahoana?
Rehefa vita ny raharaha miaramila nataon’i Davit Samkharadze, dia nivavaka tamin’Andriamanitra izy mba hanampy azy hiova. Nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy ny ampitson’iny.
Nitady ny tari-dalan’Andriamanitra i Tamazi Biblaia, ka notarihiny hifindra tany amin’ny tanàna iray hafa.
Nanampy an’ireo Vavolombelona nanao pirinty boky ara-baiboly i Natela Grigoriadis. Niatrika olana hoatran’ny hoe tsy ho voavaha izy tamin’izay.
Tamin’ny taona 450 tany ho any na talohan’izay aza no vita ny Baiboly sora-tanana amin’ny teny géorgien.
Nitombo be ny isan’ny Vavolombelon’i Jehovah rehefa lasa nahaleo tena i Géorgie.
Ahoana no nandaminan’ny Vavolombelona ny fiangonana, ny fivoriana, ny fivoriambe, ary ny fandikana boky ara-baiboly, rehefa rava ny fitondrana kominista?
Tena te hamaky an’ilay Baiboliny vaovao i Badri Kopaliani, ka naka andro tsy hiasana mba hamitana an’ilay izy.
Nifindra tany amin’ny faritany mbola nila mpitory bebe kokoa i Artur Gerekhelia, tsy ampy herintaona taorian’ny batisany.
Nanana toerana ambony tao amin’ny Antoko Kominista géorgien i Madona Kankia, nefa nanapa-kevitra ny hanova ny fiainany.
Nampian’i Igor Ochigava sy Gizo Narmania ireo Vavolombelona sy ny olon-kafa mba hahazo sakafo sy zavatra ara-panahy, nandritra ny ady tany Abkhazie.
Tsy azoazon’i Pepo Devidze ny Vavolombelon’i Jehovah ka izy mihitsy no namantatra izay ampianarin-dry zareo, araka ny tenin’ny mamany.
Nitombo be ny isan’ny mpitory nandritra an’ireo taona ireo, kanjo nisy fanenjehana tampoka taorian’izay.
Ahoana no fahitan’ny olona tany Géorgie ny herisetra natao tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah?
Notahin’i Jehovah ny ezaka nataon’ireo mpitory nampitombo ny fanompoany.
Dimy amby roapolo taona na latsaka ny ampahatelon’ny mpisava lalana any Géorgie.
Faly ireo olona matahotra an’Andriamanitra fa mahare ny vaovao tsara amin’ny fitenin-drazany.
Nahatsapa ny renibe roa hoe be fitiavana ny mpiara-manompo.